Nzvimbo Dzinokosha, Eurasia & CIS Desk ... | Law & More B.V.
Eurasia izita renzvimbo nzvimbo iyo inosanganisira Europe neAsia. Isu tinosanganisa ruzivo rwemisika iyi nehunyanzvi hwedu hwenzvimbo dzakasiyana dzeDutch nedzepasi rese. Kuburikidza nemusanganiswa uyu wakasarudzika isu tinokwanisa kupa iro basa rizere kumabhizinesi eEurasian nevanhuwo zvavo.
Sebhizinesi rinoshanda mukati medzi zvikamu, iwe unogona kuuya nemhando dzese dzezvinhu zvakaoma zvemutemo. Mushure mezvose, zvikamu izvi hazvimbomira, zviri kushanduka. Magweta edu inyanzvi idzo minda idzi dzayambuka uye dzinogona kupa bhizinesi rako nezano repamutemo kana rubatsiro, semuenzaniso pane chinogadzirwa.
Kunyangwe kupokana kuchikonzera manzwiro kumhanya zvakakwirira, nemhedzisiro yekuti mapato ese haaoni mhinduro zvekare, at Law & More tinotenda kuti mhinduro yakabatana iyo inogutsa mapato ese akabatanidzwa inogona kuwanikwa kuburikidza nekureverera. Mukuita uku Law & More masvikiro haangotorere hanya nezvido zvevaviri mapato panguva yekubvunzana, asiwo anovimbisa rubatsiro rwepamutemo uye rwepfungwa.